Warshadaha Shiinaha FIDO Jars iyo alaab-qeybiyeyaasha | Si wanaagsan
Carton iyo Pallet
Gaarsiinta T ime :
Qiyaastii 30 maalmood kadib markii muunadda iyo amarkii la xaqiijiyey (oo aan lagu darin alaabooyin dheeraad ah oo la sii ambaqaado ama amar gaar ah)
Lagu Sameeyay taageero:
Loogu talo galay miyir-qabka caafimaadka, ka-qayb-qaadashada, dhiirrigeliyaha cuntada, ee habsami u socodka. Wax kasta oo aad u aqoonsatid, dhaladaani waxay kuxiran tahay inay kaaafiso baahiyahaaga. Waxaa lagu farsameeyay Talyaani oo ah muraayadda cad ee ugu wanaagsan, oo leh furitaan ballaaran oo si sahlan loo heli karo iyo daboolka hawada.
1. Seeraha Airtight
Xulo. Waxaad haysataa dariiqii. Shaambadda hawo-mareenka ee weelku ku jirto ayaa ilaalineysa cunnada iyo dhadhanka cuntadaada, iyo sidoo kale inay ka hortagto baxsiga. Quudi reerkaaga ugu ugu wanaagsan uguna wanaagsan.
2. Aad bay u caddahay in la arko
In la ogaado waa in la xakameeyo. Dhalada waxaa loo habeeyay muraayad si qurux badan u muuqata, taasoo kuu tusinaysa aragtida weyn waxa gudaha ku jira. Waxaa ku jira calaamadaha gogol-xareynta calaamadeynta iyo aqoonsashada.
3. Helitaan fudud
Farxadda dhalada ku jirta, wax halgan ah oo lug ku lug leh ma jiraan. Furitaanka ballaaran wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gudaha gasho si aad u fududaato oo u buuxin karo. Daboolka furitaanka ayaa furmi doona oo xirmaya adiga oo aan la dagaallamin.
4. Waxay ku habboon tahay dhammaantood
Culayska iyo culayska wanaagga hal weel oo keliya. Ha murugoon, hana isu tanaasulin, haku fikirin laba jeer. Weelku waa balaaran yahay oo qiyaas ahaan buuxi karaa tiro aad u weyn oo ku filnaan karta baahidaada.
Hore: Jars Kontroolka Jalalka oo ay wataan Koofiyado Laba-Bilood ah
Xiga: Jikada Kaydinta Glass oo leh Cork
Wejiga toosan ee tubada toosan ee Cork Stopper (D30)
Qalabka Kaydinta muraayadaha laba-geeska leh ee Plast Midabada Badan
Vials Vials Flat Top Iron Flat Top Screw Ca ...
Dhalada Cabitaanka Khamriga ee Bulb
Muraayadaha Weyn Mason Glass Jars Quustted Crystal wit ...